Zishaya phansi izinyunyana ngodaba lwezikole - Ilanga News
Home Izindaba Zishaya phansi izinyunyana ngodaba lwezikole
Kulindeleke ukuba uGrade-R, 1,2.3,6,10 no 11 bavule
IQALA phansi impi mayelana nokubuyela kwengxenye yesibili yabafundi ezikoleni ngoMsombuluko njengoba izinyunyana zothisha ziphikisana nalokhu. Kulindeleke ukuba uGrade-R, 1, 2 3, 6, 10 no-11 babuyele esikoleni ngoMsombuluko, kanti uGrade 4, 5 no-8 bona umhla ka-3 kuNcwaba (August).
UNobhala weSadtu KwaZulu-Natal, uNkz Nomarashiya Caluza, uthi ngeke kwenzeke ukuthi kubuyele inqwaba yamakilasi ngesonto elizayo. Uveze ukuthi sebewubhalele umnyango bawutshela ukuthi mawuphumele obala, utshele izwe ukuthi kawukulungele ukubuyisela abafundi ezikoleni. “Othisha ngeke bakwazi ukumelana nalesi simo njengoba okwamanje besazama ukwamukela lesi simo ababhekene naso. Ngikhuluma nje, kunezingane ezingafundi ngenxa yokuthi kwandiswe amakilasi abekho othisha, umnyango kawubandisanga.
“Iqiniso lithi okwamanje umnyango kawukulungele ukubuyisela izingane ezikoleni, kumele kubuyele i-grade eyodwa,” kusho uNkz Caluza. UMengameli we Educators Union of South Africa (Eusa), uMnu Scelo Bhengu, uthi bazokwenza okusemandleni ukuthi ngoMsombuluko ozayo abafundi kababuyeli esikoleni. Uthi kabagudluki ekutheni bekuvele kungekho kuhle ukubuyela esikoleni kuka Grade-7 no-12. “Ososayensi sebeshilo ukuthi noma ngabe usindile kulesi sifo, kodwa sishiya umonakalo ngaphakathi, okungaba wukulimala kwamaphaphu nokuphazamiseka kwengqondo.
“Kasazike ukuthi kubhuduzelwa nje, kujahwephi. Le nto isiveza lokhu esasikusho ukuthi osomathuba bafuna amathenda okudla imali kahulumeni,” kusho uMnu Bhengu.
UMengameli weNatu, uMnu Allen Thompson, akatholakalanga. I-Public Servants Association of South Africa yona ithi akulona icebo elihle ukubuyiselwa kwezingane esikoleni ngoba kulesi sikhathi sasebusika kubhoke umkhuhlane.
Ithi eMakaula Secondary School, e-Eastern Cape, bawu-200 abafundi okutholakale ukuthi bahaqekile, izikole eziwu-131 zivaliwe, eziwu-40 ka-zikabi nazo izivikeli. Iveze ukuthi kuzwelonke bawu-1 787 abafundi abahaqekile, kanti bangaphezulu kuka-100 othisha abagulayo, abanye babo sebeshonile.
UNobhala wezigungu ezilawula izikole kuzwelonke, uMnu Ndo Matakanyane, utshele ILANGA ukuthi kabaphikisani nokuvulwa kwezikole kodwa abazali kumele bazenelise ukuthi ziphephile yini izingane zabo, uma zingaphephile bangazibuyiseli esikoleni.
UNgqongqoshe wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnu Kwazi Mshengu, uthe ngeke zisavalwa izikole uma kutholakale ukuthi kukhona abahaqekile, sekuzokhucululwa lelo banga okutholakale inkinga kulona, iqhubeke impolompolo kuze kuyolamula izivivinyo zokugcina.
Previous articleUfele esangweni onesi besaba iCovid
Next articleIsengcupheni imiholo yabaqeqeshi beBafana